नेपाली चलचित्रमा काम गर्न तयार छु - कुराकानी - साप्ताहिक
नेपाली चलचित्रमा काम गर्न तयार छु
 सुशान्त खत्री, नृत्य कलाकार
यतिबेला म नृत्यकै सिलसिलामा भारत आएको छु । केही इभेन्टमा सहभागिता जनाइरहेको छु ।
शिव परियारको ‘मंगली...’ गीतको म्युजिक भिडियोमा कसरी आबद्ध हुनुभयो ?
‘मंगली...’ गीतको शीर्षक सुनेर नै म उक्त गीतको भिडियोमा काम गर्न तयार भैसकेको थिएँ । गीत रमाइलो लागेकाले अभिनय तथा नृत्यका लागि तयार भएको हुँ ।
उक्त भिडियोमा काम गर्दाको अनुभव कस्तो रह्यो ?
रमाइलो रह्यो । भिडियोका गायक शिव परियार, अभिनेत्री आँचल शर्मा तथा निर्देशक विकास सुवेदीसँगको पहिलो अनुभव सुखद रह्यो । गीत राम्रो बन्यो ।
भविष्यमा पुन: नेपाली भिडियोमा काम गर्दै हुनुहुन्छ कि ?
मैले हालसम्म तीनवटा नेपाली गीतको म्युजिक भिडियोमा काम गरें । तीनवटै लोकप्रिय भएका छन् । भविष्यमा यस्तै राम्रा गीतबाट प्रस्ताव आयो भने खुसीका साथ काम गर्नेछु । नेपाली म्युजिक भिडियो यत्तिको गुणस्तरीय बन्न थालेकोमा खुशी पनि लागिरहेको छ ।
कम समयमै यत्तिको लोकप्रिय हुन्छ भन्ने लागेको थियो ?
यति छोटो समयमै लोकप्रिय हुनेछ भन्ने त मैले सोचेकै थिइनँ । मानिसहरूले गीतसँगै मेरो अभिनय तथा नृत्य अनि अभिनेत्री आँचल शर्मासँगको जोडी समेत मन पराइदिनुभएकोमा खुसी छु ।
नेपाली चलचित्रबाट काम गर्ने प्रस्ताव आएको छ कि छैन ?
भरखर त नेपाली म्युजिक भिडियोमा काम गर्न थालेको छु । नेपाली चलचित्रबाट अहिलेसम्म त्यस्तो प्रस्ताव आएको छैन, यद्यपि प्रस्ताव आयो भने काम गर्ने सक्दो प्रयास गर्नेछु ।
बलिउडमै सक्रिय हुने सम्भावना कति छ ?
‘एबिसिडी–३’ मा अनुबन्धित भैसकेको छु । चाँडै नै उक्त चलचित्रको छायांकन प्रारम्भ भएर नोभेम्बरमा रिलिज हुनेछ ।
प्रकाशित :असार २९, २०७५
मर्मतको काम राति नै गरियोस् असार १९, २०७६
अधिकार बुझाउन सकिएको छैन असार १८, २०७६
राजा बन्न साह्रै गाह्रो हुने रहेछ असार ६, २०७६
आयुष र प्रितमले इतिहास रचिसके जेष्ठ २५, २०७६
कलाकारले निर्देशक बन्ने सपना देख्छ जेष्ठ २१, २०७६
प्रेमको अपेक्षा गरेकी छु जेष्ठ ९, २०७६
कुनै पनि कुराको टेन्सन लिन्नँ जेष्ठ ८, २०७६
तीजका गीत रेकर्ड गराउँदैछु जेष्ठ १, २०७६
अझै हाँस्न पुगेन भन्ने गुनासो छ वैशाख २५, २०७६
वास्तविक कन्सर्टको स्वाद दिनेछौं चैत्र २३, २०७५